XOG:- Sababta rasmiga ah ee xilka looga qaaday C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Sababta rasmiga ah ee xilka looga qaaday C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon (AKHRISO)
Tan iyo markii ay soo shaac baxday in ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre uu xil ka qaadis ku sameeyay afhayeenkii xukuumadda Soomaaliya C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon, ayaa waxaynu arrinkaasi ku bilawnay inaynu ku sameeyno dabagal dheer.
Ilo lagu kalsoonaan karo oo aynu heleyno ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu ka warhelay in afhayeenka xukuumadda C/casiis Goobdoon aanay wadan wax shahaado oo dugsi sare ah, islamarkaana ku tilmaamay in mid da’ ahaan iyo aqoon ahaaneedba aanay xilkaasi sii wadi karin.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa la sheegayaa inuu markaasi kadib amar buuxo siiyay wasiiru dowlaha xafiiskiisa C/laahi Xaamud inuu xilka ka qaado afhayeenka xukuumadda C/casiis Goobdoon oo in muddo ah xilkaasi soo haayay, waxayna arrintaan noqonaysaa middii ugu horeeysay oo qaab ceynkaan ah xilka looga qaado mas’uul ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka mid yahay hay’adaha dowladda ee ugu shaqaalaha badan, waxaana la sheegaa inay haatan halkaasi ka shaqeeyaan shaqaale aad u badan oo aan aqoon lagu qorin, balse garab iyo qabiil halkaasi lagu geeyay.
Sidoo kale, arrinta ugu yaabka badan ayaa waxay tahay sababta isaga kaligiisa loo bar-tilmaameedsaday.
C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon oo ah qof da’diisa ay aad u yartahay marka loo eego xilka uu haayo ayaa waxaa xilkaasi loo magacaabay xilligii uu dalka ra’iisul wasaaraha ka ahaa Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, kadib markii ay xilalkaasi isaga tageen labo afhayeen oo isaga ka horeeysay.
C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa ah wiil uu dhalay Allaha u naxariistee Cabdi Xaaji Goobdoon oo ahaa rug-cadaa saxaafadeed oo si weyn looga yaqiinay Soomaaliya.
Allaha u naxariistee Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa geeriyooday 26-ka Janaayo ee sanadkii 2016-ka, kadib markii uu kusoo booday xanuun dhinaca wadnaha ah, wuxuuna xilligaasi ahaa la taliyaha dhanka arrimaha warfaafinta ee xafiiska ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.